Calaamadda 1 ee Muuse: Iidda Kormaridda - Injiilka oo ku qoran af-soomaali
Maya ma aan Xafidaayo Dhamaan Ammarradda oo dhan
Waxaa hadda laga joogaa muddo 500 sano tan iyo wakhtigii Nabi Ibraahim (NNKH) iyadoo ahayd muddo ku saabsan 1500 BC. Ka dib markii Ibraahim dhintay, Faraciisii iyada oo loo marayo wiilkiisii Isxaaq, hadda loo yaqaan reer binu Israa’iil, ayaa noqotay tiro badan oo dad ah, laakiin sidoo kale ayaa addoommo ku noqdeen dhulkii Masar. Tani waxay dhacday, maxaa yeelay,Yuusuf, awoowihiisii–weynaana uu ahaa Ibraahim (NNKH) waxaa loo iibiyey sidii addoon oo kale dhulkii Masar iyo markaas, sano ka dib, qoyskiisana isagii la mid noqdeen. Tan waxaa lagu sharaxay dhamaanteed sida ku qoran Bilowgii 45-46 – Buuggii koowaad ee Muuse ee ahaa Tawreedka.
Haddaba sidaas daraaddeed waxaan u timid calaamaadka Nabiga kale oo weyn – Muuse (NNKH)- kaasoo lagu sheegay Kitaabka labaad ee Tawreedka, loo yaqaan Baxniintii maxaa yeelay, waa cadayn sida Nebi Muuse (NNKH) keenaysaa in reer binu Israa’iil Masar ka soo baxaan. Muuse (NNKH) ayaa lagu amray in uu, oo uu Rabbigu ku amray in uu la kulmo Fircoonka Masar iyo waxa ayna keentay tartanka u dhexeeya Muuse (NNKH) iyo saaxiriintii Fircoon. Tartankani ayaa soo saaray sagaalkii belaayo ama masiibooyinkii caanka ahaa ee Fircoon oo ay ahaayeen calaamooyinkiisii. Laakiin Fircoon uma uusan gudbin naftiisii doonista Ilaahiisa oo waxa uu ku caasiyay Alle calaamadahaan.
Suurat An- Naazicaat (Suurat 79- Kuwa la Duufsaday) sidan ayeey u sharacaysa
Ma ku soo gaadhay warkii (Nabi) Muuse. Markii Eebe uga yeedahy Toggii barakaysnaa ee Dhuwa. Kuna yidhi u tag Fircoon wuu xadgudbaye. Oo ku dheh ma rabtaa inaad daahir noqotid. Oon Eebe Jidkiisa kugu hanuuniyo kana yaabtid. Wuxuuna tusiyay (Nabi-Muuse) Aayad wayn.
Suraat An-Naazicaat 79:15-20
Suurat Al-Muzzammil (Suurat 73 –) waxay sharaxaysa jawabtii Fircoon:
Suurat Al-Muzzammil 73:16
Maxay aheyd ‘Mucjisada ugu weynayd’ ee uu Nabi Muuse ku sheeagy Suurat Al-ANazicaat ee ‘Ciqaabta adaga’ ee Firciin taasi oo lagu sharaxay Suurat Al-Muzzammil? Labadaba sida Calaamada iyo Ciqaabtaba waxay ka mid tahay 10 ki balaayo.
Markaasaa Ilaah uu keenay cabsida belaayadii 10aad (masiibo). Halkaa marka ay marayso Tawreed siinayaa qaar ka mid ah diyaarinta iyo sharaxaad ka hor inta cudurka 10aad ka yimaado. Quraanka ayaa sidoo kale waxaa loola jeedaa in ay marayso qaybo ka mid ah aayadan ee soo socda
Waxaan dhab u siinay (Nabi) Muuse sagaal Aayadood (Mucjiso) oo cad cad ee warso Binii Israa’iil markuu u yimid oo ku yidhi Fircoon waxaan kuu malayn Muusow mid la sixray.
Wuxuuna yidhi (Nabi Muuse) waad ogtahay inuusan soo dejinin kuwaan waxaan Eebaha Samooyinka iyo Dhulka ahayn iyagoo xujooyin ah, anna waxaan kuu malayn Fircoonoow mid la halaagi.
Suurat Al-Israa 17:101-102
Sidaas Fircoon waa ‘lagu baabbi’in’. Laakiin sida waxaa tani u dhacaysaa? Ilaah baa burburintii la soo dhaafay siiyey siyaabo kala duwan. Dadkii Wakhtigii Nuux waxaa ay ku qaraqmeen daadkii adduunka oo idil, iyadoo Xaaskii Luudh waxay noqotay tiir cusbo ah. Laakiin baabba’an waxa uu ahaan doonaa mid ka duwan, maxaa yeelay, waxaa sidoo kale ay aheyd inuu noqdo Calaamad dadyowga oo dhan – Calaamad Wayn. Sida Quraankuna leeyahay
Wuxuuna tusiyey (Nabi Muuse) Aayad wayn. Wuuse beeniyey oo caasiyey (Fircoon)
Suurat An-Naazicaat 79: 20
Waxaad ka akhrisan kartaa sharaxaadkii Belaayadii 10aad ee Baxniintii Tawreedka lifaaqan halkan oo waanan rajaynayaa inaad sidaas samayn sababtoo ah waa cadeeymo aad u dhameystiran, iyadoona kaa caawin doontaa in si fiican aad u fahamtid sharaxaada hoose.
Iidda Kormaridda Wanka laga badbaadshay dhimashada
Qorniinkani wuxuu inoo sheegaysaa in burburinta la Xukumay ee Ilaah ahaa in wiil kasta oo curad ahaa inay u dhintaan habeenkaas marka laga reebo kuwa jooga guriga kuwaasoo neef baraar ah loogu soo allabaryey oo dhiiggiisa lagu rinjiyeeyey albaabka gurigaas. Baabba’a Fircoon, haddii uusan addeecin, noqon lahayd in wiilkiisa iyo kii dhaxalka lahaa uu dhiman doono. Oo guri kasta Masar lumin lahaa wiilkiisa curadka ah – Haddii aysan soo gudbin allabari wan yar oo rinjiyaynta neefka dhiiggiisa ku xardhin aqalka tiirarkiisa. Sidaas bay Masar ku wajahday musiibo qaran.
Laakiin guryaha halkaas neef baraar ah loogu soo allabaryi jiray oo dhiiggiisana rinji ahaa oo albaabka tiirarkiisa lagu xardhay, ballanqaadkii ahaa in qof kasta noqon lahaa ammaan. xukunka Ilaah ayaa ka gudbi lahaa gurigaas. Sidaas daraaddeed ilaa maantadan la joogo oo calaamad ayaa la yidhaahdaa Kormaridda (Tan iyo markii dhimashadii gudubtay guryihii oo idil halkaas oo dhiig wan lagu rinjiyeeyay albaabkoodii). Laakiin kee buu u ahaa dhiiggii ku dul sharaxnaa albaabka calaamad? Tawreedku wuxuu inoo sheegayaa:
RABBIGU wuxuu Muuse ku yidhi… “… Aniga ayaa ah RABBIGA. Dhiigga [wanka Kormaridda] waxay noqon doontaa calaamo idiin ahaan guryihiina meesha aad joogto; oo markii aan dhiigga arko, waan iska kiin kor mari doonaa. (Baxniintii 12:13)
Sidaas daraaddeed, in kastoo RABBIGU uu eegayay dhiigga ku dul sharaxan albaabka, oo markuu arkay Isagu oo waa uu iska mari lahaa, dhiiggoodu Isaga uma ahayd Calaamad. Waxa uu sheegay in dhiiggu uu ahaa ‘calaamad idiin ahaatay’- dadka. Oo kordhis ahaan waa calaamad u suganaatay dhammaanteen kuwa akhriya cadayntan Tawreedka. Sidaas aawgeed sidee bay inoogu tahay Calaamad? Ka dib markii ay dhacdadan ku dhacay RABBIGU wuxuu iyagii ku amray inay:
Dabaaldeg maalintan sida oo amar daa’imis ah ka ab inuu yimaado. Marka aad dalka ku soo galaan… dhawrtaan oo xafladan… Waa allabarigii Kormaridda RABBIGA u ah
Iidda Kormaridda Bilowday Kalaandharka Yuhuudda
Sidaas daraaddeed reer binu Israa’iil oo la amray in ay u dabaal degaan Kormaridda isla maalintaas sanad kasta. Tirsiga taariikhda reer binu Israa’iil waa ka duwan yahay wax yar kan reer galbeedka, si maalinta sannaddii isbedel yar sanad kasta haddii aad u eegtid Kalaandharka reer Galbeedka, aad u la mid ah sida Ramadaanka, sababta oo ah waxay ku salaysan tahay ka duwanaasho sano dhererka, guuro sanad walba Kalaandharka reer Galbeed. Laakiin ilaa maantadan la joogo,weli 3500 sano ka dib, dadka Yuhuudda way sii wadaan in ay sannad walba u dabaal degaan Kormaridda sannad walba xasuusta dhacdadan laga soo bilaabo wakhtiga Muuse (NNKH) anagoo addeecsan amarka ka uu bixiyey kadibna RABBIGA uu ku bixiyey Tawreedka.
Muuqaal laga bilaabo maalinta casriga ah marka wanan yaryar oo badan oo lagu gowracay dabaal dega Kormaridda Yuhuudda ah ee soo socda
Halkan waa sawir – maalmaha casriga ah ee dadka Yuhuudda gawrici baraar Kormaridda soo socda. Waxa ay la mid tahay dabaal dega ciida.
Oo aan raadraacno dabaal degan taariikhdeeda waxaan xaqiijin karnaa la soco karo wax arrin aan caadi ahayn. Waxaad ku arki karnaa Injiilka (Injiil) halkaas oo ay ku diiwaan faahfaahinteeda qabashadii iyo maxkamadayntii Nabi Ciise Masiix (NNKH):
“Sidaa aawadeed Yuhuuddii waxay keentay Ciise Masiix…gurigii taliyaha Romaanka [Bilaatos]…si looga fogaado wasakh oo rasmi ah aawadeed Yuhuuddu kama soo geli doonaan hoyga; waxay doonayeen in ay awoodaan in Kormaridda wax ay cunaan“…[Bilaatos ] ayaa u sheegay in [hoggaamiyayaasha Yuhuudda] “… Laakiin waa caadadiinii in aan idiin sii daayo hal maxbuus markiiba wakhtiga Kormaridda. Ma rabtaa in aan idiin sii daayo ‘boqorka Yuhuudda’? [I.e. Masiixa]” Waxay dib ugu qayliyeen, “Maya isaga maya…”
Yooxanaa 18:28, 39-40
Haddii si kale loo dhigo, Ciise Masiix (NNKH) waa la xiray oo loo diray in la khaarajiyo dil maalintii Iidda Kormaridda ee kalaandharka Yuhuudda. Haddaba haddii aad xusuusataan ka timid Calaamad 3 ee Ibraahim, mid ka mid ah darajooyinka Ciise la siiyey isaga uuna siiyey Nebi Yaxya (NNKH) ee ahayd
Maalintii labaad Yooxanaa wuxuu (i.e. Yaxya) arkay Ciise (i.e. Ciise) soo socda isaga xaggiisa ku arkay oo wuxuu ku yidhi, “Bal eeg, Wanka Ilaah, kan qaada dembiga dunida. Tani waa mid ka mid ah waxaan xaalkan aan idhi ‘Nin Kan iga daba imanayaa waa iga horreeyey waayo, hortay buu jiray'”.
Ciise Masiix (NNKH) Canbaareeyeen Maalintii Kormaridda
Oo halkan aan ku aragnaa aqoonsiga gaar ahaaneed ee Calaamadan. Ciise Masiix(NNKH),ee ‘Wanka Ilaah’,waxaa loo diray qaarajin dil fulineed (allabarigii) ahaa isla maalintaas in Yuhuudda oo dhammi ee nool markaas (Sanadkii 33 AD ee kalaandharka reer Galbeedka) ayaa ku allabaryaya neef baraar ah oo xasuusta ah Iiddii Kormaridda ugu horeysay in uu ka dhacay 1500 sano ka hor. Tani waa sababta dabaal dega Kormarista sida caadiga ah dhacdaa sanad kasta in todobaadkii la mid ah sida Easter – xusidda ku dhaco Ciise Masiix – Maxaa yeelay, Ciise Masiix (NNKH) loo diray allabari isla maalintaas.(Easter oo cashada Iidda Kormaridda ma ahan isku mid taariikhda isla saxda ah sababtoo ah jadwalka taariikhda Yuhuudda iyo reer galbeedka ay leeyihiin siyaabo kala duwan oo la qabsado dhererka sanadka, laakiin waxa ay inta badan dhacaan isku todobaad mar walba).
Haddaba waxa aad qabtaa in daqiiqad ah oo ku saabsan waxa ‘calaamadahu’ samayan karaan. Waxaad ka arki kartaa calaamadaha qaar ka mid ah hoos halkan.
Maxaad samayn karaan ‘calaamadahu’? Waxay yihiin tilmaamo in maskaxda si ay u sameeyso fekero wax kale
Markii aan calaamad ka mid ah ‘dhaladii iyo lafo’ arko waa in la sameeyo laguna fekero dhimasho iyo halis. Calaamadda ah ‘dedan oo Dahabiga ah’ waxaa u malaynay in la sameeyo kuna fekirno McDonalds. Calaamadda ah ‘√’ ee Bandana ciyaaryahanka tenniska ciyaara Nadal ee waa calaamadda shirkada Nike. Nike waxay doonaysaa in aan ku fikirno markii aan aragno calaamadan ciyaar yahankan Nadal. Haddii si kale loo dhigo, Calaamadaha jira tilmaamo in qofku maskaxda ku soo toosiyeen fikirkeena in shayga la doonayo. Calaamadan ee Muuse (NNKH) waa Ilaah oo na siiyey calaamada. Muxuu uu calaamad innoo siin? Hagaag calaamadan, iyadoo waqtiga cajiib baraar la allabaryi jireen maalinta la mid ah sida maalinti Ciise Masiix waa in ay ahaadaan tilmaame ah in allabariga Ciise Masiix (NNKH).
Iidda Kormaridda waa ‘Calaamad’ iigu in ay farta ku fiiqay in allabariga Ciise Masiix.
Waxaa ka shaqeeya maskaxda sida waan muujiyey jaantuska halkan igu saabsan. Calaamadda waxaa jiray in ay ii tilmaami siintii Ciise Masiix. Kormariddii kowaad ee hore wananka ayaa lagu allabaryi jiray oo dhiigga lagaga miiro iyo iyadoo la faafin jiray dhiigaas si dadka ay u noolaadaan. Oo sidaas, Calaamaddan ayaa tilmaamaya in Ciise Masiix waa inoo sheegaysaa in uu, “Wanka Ilaah’, ayaa sidoo kale la siiyey si uu u dhinto si aan nolosha u heli karno.
Allabariggii wiilkii Ibraahim ahayd in ay noo tilmaanto ku fikirkeenna Ciise Masiix
Waan aragnay in Calaamada 3 ee Ibraahim in meeshii Ibraahim (NNKH) lagu imtixaamay waxay allabariga wiilkiisa waxay ahayd Buurta Moriyaah. Laakiin neef baraar ah oo wakhtigii dambe ayaa lagu allabaryey meeshii wiilkiisa. Wan ayaa dhintay si uu wiilkii Ibraahim u noolaado. Buur Moriyaah waxay ahayd isla meeshii halkii Ciise Masiix (NNKH) loo siiyey allabariga. Taasi waxay ahayd Calaamad in aan ku fekirno in Ciise Masiix (NNKH) si ay u loo siiyay allabarigii laguna fiiqayo meeshaas. Halkan Calaamaddan ee Muuse waxaan ka heli tilmaamaha kale si ay u dhacdo xaflad la mid ah – loo siinayo Ciise Masiix (NNKH) allabari – tilmaamayo maalinta kalandharka taariikheed ee allabariga Iidda Kormaridda. Allabari wan ayaa mar kale loo isticmaalaa in lagu tilmaamo in ay dhacdo dhacdo isku mid ah. Waa maxay sababtu? Waan sii wadi doonaa calaamada xiga ee Muuse si aan waxgarasho dheeraad ah aan uga helnaa. Calaamaddani waa bixinta ee Sharciga ee Mount Sinai.
Laakiin in aan dhammayno calaamaddan, maxaa ku dhacay Fircoon? Sida aan ka akhrin karno qayb ka mid ah Tawreedka, isagu ma uu u fiirsan digniinta iyo wiilkiisa curadka ahaa (dhaxalka) habeenkaas dhintay. Sidaas daraaddeed ayuu ugu dambeyntii u ogolaaday in ay reer binu Israa’iil ka tagaan Masar. Laakiin markaasuu bedelay fikirkiisii oo uu isqoomameeyey oo raacdaystay ilaa ay ka yimaadeen Badda Cas. Wuxuu RABBIGU ka dhigay reer binu Israa’iil inay dhex maraan badda laakiin fircoon oo ay la socdaan isaga iyo ciidankiisii ku maanshaynay khasaaro. Sagaalka belaayo ka dib, dhimashada Kormaridda, iyo khasaaraha ciidanka, Masar ayaa waxaa si weyn u gaaray dhaawac wayn dhimay oo aysan mar dambena dib u helin awoodii ugu horreeyey ee dunida. Ilaah baa iyada xukumay.
Tags:Calaamadaha MusaIsa al Masih in TawreedIsa in TawreedKormaridda in TawreedMusa ee QuraankaMusa in IslamMusa in TawreedMusa iyo FircoonMusa NebiMuuse QuranMuuse SCWMuusow in IslamNabiga MusaNabiga Musa iyo Fircoonnebiyadii Islaamkanolosha ee Musa nebigastory of Musa iyo FircoonSuraat An-NaazicaatSuurat Al-Muzzammilwaa kii nebi Musa